MAXAA SHARCIGA LOOGU SINAAN LA YAHAY WAA YAABE? – hogaanka.org
Sharci marka laga hadlayo waa arin aad u balaadhan oo ku saleysan ilo kala duwan balse anigu aan u kala aqaano sharciga aan isbedelka la hayn iyo shaciga aan dhameys tirneyn (qabyada ah) kuwan:
1) Sharciga Allah (swt) oo ku salaysan diinta Alle kaas oo ka soo burqada quraanka iyo sunaha oo saldhig u ah meesha laga soo qaadanayo xukun kasta oo xidhiidh la leh nolosha adamiga ee casri kasta,kuna saleysan oo mar walba la jaanqaadaya isbedelka nolosha adamiga,sharcigan oo aan u baahneyn wax ka bedel iyo wax ku darid balse casri walba la socda oo waafaqaya nolosha iyo isbedelka waaya caalamka waayo wuxuu ka yimi xaga Allah(swt) oo isagu maamulka oo dhan iska leh ahna ka qorsheyey jiritaanka waxkasta oo jira isla markaana cilmigiisa ku habeeyeyey qabka ugu haboon ee adamigu uga faa’iideysanayo sharcigan Allah(swt). Sharcigani waa mid loo siman yahay, oo si cadaalada Adamiga ugu xoqsoorayo hadii uu helo xaakim caadil ah oo aqoona u leh sharcigan.
2) Sharci Adamigu Sameyey: Sharcigani waa mid Adfamigu sameyey oo uu ka soo qaatey meelo kala duwan oo mar walba isbedel lagu sameeyo waayo waa mid marka horeba ka soo baxay ilo kala duwan oo isbedelka nolosha adamiga uun la socda waayo markiisa horeba adami ayaa sameeyey oo ku saleeyey danahiisa gaar ka ah ee wakhtigaasi kani waa mid kabkab ah oo laga yaabo in qaar laga soo qaatey Sharciga Allah (swt),qaarna laga soo qaatey dhaqamo hore oo dad hore isku maamuli jireen.
Sharcigan dambe oo inta badan dawladaha dunidani isticmaalaan waxaa ay ka soo qaataan waxa loo yaqaan Dastuurka oo ah meesha ay ku saleeyaan dhamaan shuruucda ay sameenayaan. Sharciga Adamigu sameystey waa mid mar walba qabyo ah oo u baahan dhameystir waayo waxaa uu ku sameysan yahay danaha dawladaha waana mid ka soo baxay maskaxda adamiga oo koreysa maalin walba markaa waa qabyo u baahan dhameystir taasi waa tan keenta in aynu maqalno dastuurkii baa la furayaa oo wax laga bedelayaa.
Arintaasi waa sharax yar oo kooban oo aan uga dan lee yahay fahanka guud ee sharciga balse hadii aan u soo noqdo dulucda maqaalkeygan waxaa aan u ma lee nayaa in akhristow aad is weydiineysid waa kuma sharciga aan loo sinayn?
Jawaabteydu waa Sharciga Somaliland ee dad sameynta ah waayo dastuurka dalku waxaa kuu dhigayaa in sharciga dalka loo siman yahay balse waxaa aan la yaabaa dhacdooyinka qaarkood oo kuu cadeynaya in sharcigu si siman loogu xaqsoorin muwaadiniinta,waayo
Weliba arimaha la xidhiidha Siyaasada, iyo nabadgelyada tani si guud baan uga hadlayaa balse waa mid jirta.
Cadeynta kowaad ee aan u cuskanayaa waa:-
1- Waxaa arkeysaa inan dhalin yaro ah oo suxufi ah oo qoraal ama faalo uu qorey lagu xidhayo oo lagu caga jugleenayo
2- Waxaa kale oo arkeysaa oday sheeganaya xil dhaqameed sida ugaas,boqor,suldaan,caaqil oo hadalo hanjabaad aflagaado,qabyaalad iwm si toosa warbaahinta u marinaya oo waxaa uu ku hadlayaa lid ku yihiin sharciga dalka,nabadgelyada oo aan wax talaabo ah loo sharciga waafaqsan oo laga qaadayaa aaney jirin.
3- Sidoo kale waxaa arkeysaa Siyaasiin ku dhawaaqaya xisbiyo ururo magacyo jahbadeed ama qabiil leh oo aanu dastuurka dalka iyo sharciyada abniga mid na aan waafaqsaney oo aan sharciga dalka waxba ka odhaneyn marka laga reebo kuwa la xidhiidha dhinaca diinta oo markiiba lala kacayo.
TARTAMAYAASHA DOORASHADA MAXTOOYADA EE SOMALILAND MIYEY HURDAAN MISE Q:6………? Previous
5 Ways the Digital World Makes It Harder Than Ever to Raise Mentally Strong Kids Parenting practices aren’t keeping up with technology Next